Trump oo ka noqday hadal uu hore u yidhi - BBC News Somali
Putin iyo Trump
Trump waxa uu dhaleecayn culus kala kulmay aqalka Congress-ka oo ku dhaliilay hadalkiisii ahaa in aanay u muuqan sabab caddayn karta in Moscow doorashooyinkaa farogelin karaysay.
Laakiin hadalkiisan u dambeeyey ayaa waxa uu ku sheegay in uu doonayey in uu ku cadeeyo in hadalkaa uu hore u yidhi uu ula jeeday in aanay jirin sabab lagu malaysan karo in Ruushku faro gelin karayey doorashada.
Waxaanu ballan ku qaaday in uu ilaalin doono doorashooyinka dame ee dalka ka dhici doona, hase yeeshee waxa uu ku nuuxnuuxsaday in xidhiidh diblomaasiyadeed iyo iskaashi dhex mara dalkiisa iyo Ruushku ka fiicanyahay khilaaf iyo colaad ka dhex abuuranta.
Trump oo weli ka raaraca Obama
TOOS Halkee kale ayay dunida uga keydsan tahay kimikadii ku qaraxday Beyrut?
Siduu jilaagan ku noqday atooraha lacagta ugu badan ka sameeya aflaanta?